स्मार्टफोनलाई ह्याकरहरुबाट कसरी जोगाउने ?:: Naya Nepal
स्मार्टफोनलाई ह्याकरहरुबाट कसरी जोगाउने ?
काठमाडौं । आजकल स्मार्टफोन हाम्रो जीवनको एक हिस्सा भएको छ। फोनकल देखि अनलाइन कारोबारसम्मको लागी, हामी यसमार्फत धेरैजसो कामहरु दैनिकरुपमा गर्छौं।
मोबाइलको बढ्दो प्रयोगका साथै अब ह्याकरहरूको आक्रमण पनि बढिरहेको छ। ह्याकरहरूले दिनहुँ प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दैछन्, कि त डाटा मार्फत वा अनलाईन फ्रडको माध्यमबाट ।फोनलाई ह्याकरहरूद्वारा लक्षित हुनबाट बचाउन टेक्नोलोजीखबरले पठनीय सामाग्री तयार पारेको छ ।
एप अर्थात अनुप्रयोग डाउनलोड गर्दा ध्यान दिनुहोस्
कुनै पनि तेस्रो पक्षीय साइटबाट तपाईंको फोनमा अनुप्रयोग कहिल्यै डाउनलोड नगर्नुहोस्, त्यसो गर्नु खतरनाक हुन सक्छ। किनभने कहिलेकाँही केहि लिंकहरू हुन्छन जसले तपाईको फोनलाई बिगार्न सक्छ। त्यसैले जहिले पनि गूगलको प्ले स्टोर र एप्पलको एप स्टोरबाट मात्रै एप डाउनलोड गर्नुहोस्। यसबाहेक यदि तपाईं अन्य एप डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने विश्वासयोग्य स्टोरबाट मात्र एप डाउनलोड गर्नुहोस् । उदाहरणको लागि सामसँगको स्टोर जून गूगलमा आधारित छ ।
बलियो पासवर्ड राख्नुहोस्
तपाईको स्मार्टफोनमा सँधै बलियो र ससक्त पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस्, कमजोर पासवर्डहरु प्रायः ह्याकरहरूको निसानामा पर्दछन र हुनैपनि बेला ह्याक हुन सक्छ। पासवर्डमा तपाईंको आफ्नो नाम, जन्म मिति, मोबाइल नम्बर जस्ता विषयहरु कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस्। पासवर्डमा विभिन्न अक्षरहरु, अंकहरु र संकेतहरुको संयोजन गर्नुहोस् ।
स्मार्टफोन अपडेट गर्नुहोस्
समयसमयमा आफ्नो स्मार्टफोन अपडेट राख्नुहोस्, यो गर्दा तपाईंको स्मार्टफोनमा भएका सेक्यूरिटी कमजोरीहरु बन्द हुन्छन्। यसको लागि कम्पनीहरुले बेला बेलामा अपडेट तथा प्याचहरु दिईरहेका हुन्छन् । यसरी ह्याकरहरूले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी ह्याक गर्न सक्षम हुनेछैनन्। यो मात्र होईन, फोन अद्यावधिक गर्दा त्यहाँ धेरै सुरक्षा सुविधाहरू छन् एन्ड्रोइड सुरक्षा प्याचका साथ, जुन धेरै फाइदाजनक हुन्छ।
मेसेजिङ्ग एप प्रयोग गर्नुहोस्
विज्ञहरू विश्वास गर्दछन् कि मेसेजिङ्ग एप प्रयोग गर्नु ठीक छ, किनकि यी एपहरूले प्रयोगकर्ताहरूको डाटा सुरक्षित राख्छन्, र यसले सुरक्षा सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दछ, जबकि सामान्य सन्देश प्रवाह प्लेटफर्महरूमा यस्तो केही हुँदैन।
यी काम नगर्नुहोस्
मेसेजिङ्ग एप वा कलमा तपाईँको व्यक्तिगत विवरणहरू कहिले पनि शेयर नगर्नुहोस् । त्यसो गर्दा तपाईंलाई पछि ठूलो समस्या पनि हुन सक्छ। अक्सर ह्याकरहरूको नजरमा त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले उनीहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू साझा गर्छन्। त्यसैले यस्तो गर्नबाट जोगिनुहोस्। मोबाइल नम्बर, बैंक खाता नम्बर, नागरिकता नम्बर, जस्ता विषयहरु सोशल मिडियाहरुमा पनि नराख्नुहोस् ।
कृष्ण युवा भएपछि कौरवको सभामा द्रौपदीलाई दुःशासनले नांगेझार पार्न खोज्दा द्रौपदीको लाज ढाकिदिने पात्रका रूपमा देखिन्छन्। बाल्यकालका कृष्णलाई कामुक देख्ने हाम्रो मस्तिष्कले युवा हुँदा द्रौपदीको लाज ढाकेको कुरा देख्न केले छोप्यो ?
द्वारकामा पनि उनी राजा मात्र भएर कहिल्यै बसेनन््। त्यही बीचमा उनले भौमासुर नाम गरेका राक्षसले १६ सय राजकन्यालाई अपहरण गरेर थुनेर राखेको कुरा थाहा पाए। भौमासुरले उनीहरूलाई यौन कर्ममा लगाउँथ्यो। यो सूचना पाएका कृष्णले कन्याहरू छुटाएर ल्याए। तर, त्यो अवस्थामा समाज त के परिवारले पनि उनीहरूलाई स्वीकारेन। कृष्णले नै तिनलाई आश्रम बनाएर संरक्षण दिए। यही घटनालाई आज हामी कृष्णका १६ सय गोपिनी थिए भन्छौं। १६ हजार पट्रानी भन्ने कथा लेखाउँछौं र भट्याउँछौं। यो पनि घटनालाई आफ्नो धरातलमा ल्याएर हेरिएको चरित्रको प्रतिछायाँ मात्र हो। जो जस्तो छ, उसले त्यसैगरी बुझ्नु अस्वाभाविक होइन। तर सिंगै समाज गोपिनीका साडी तान्ने भनेर भजनमा मस्त देख्दा समाजको अवस्था भने अध्ययनरहित देखाउँछ।